पुरानो रोमान्टिक गीतहरू तपाईंको प्रेमिकालाई समर्पण गर्न - PAMPEREDPEOPLENY.COM - सम्बन्ध
पुरानो रोमान्टिक गीतहरू तपाईंको प्रेमिकालाई समर्पण गर्न
घर सम्बन्ध प्रेम र रोमान्स प्रेम र रोमान्स oi- स्टाफ द्वारा सोहम सेनापति मार्च १,, २०१। मा
म रोमान्टिक गीतहरूको लागि एक शोषक हुँ। म शब्दहरूको प्रत्येक लम्बाइमा प्रेमको घोषणा गर्ने शब्दहरूको मुनि लुकेका गहिरा अर्थ बुझ्न मन पराउँछु।
द्रुत गतिमा चलिरहेको संसारमा व्यक्तिहरूको संगीत स्वाद प्रत्येक क्षण बदलिन्छ, तपाईंको प्रेमिकालाई समर्पित गर्न एक उत्तम गीत खोज्न गाह्रो छ। यो सजिलो छ यदि तपाईं उनलाई नयाँ बिलबोर्ड शीर्ष चार्ट सुन्न चाहनुहुन्छ। तर त्यसले यसको कुनै अर्थ राख्दैन, किनकि त्यसले यसका बारे सुनेकी हुनुपर्छ।
कतरिना कैफ जिंदगी ना मिलेगी डोबारा
युगौं पुरानो प्रेम गीतहरू फिर्ता ल्याउनुहोस् र यति धेरै वर्ष पछि उनले फेरि शब्दहरू सुन्नुहोस्। यसले उनको आकर्षण दिन्छ जुन तपाईं हेर्न चाहानुहुन्छ।
यहाँ १० वटा पुरानो रोमान्टिक गीतहरू सूचीबद्ध गरिएको छ जुन तपाईं आफ्नो प्रेमिकालाई समर्पित गर्न सक्नुहुनेछ उसको मनमा फेरि फेरि जीत लिन, एक पटक हेर्नुहोस्।
१०. अन्तहीन प्रेम: -
यो लियोनेल रिची र डायना रॉस द्वारा गाईएको छ। यो गीत कसरी सम्बन्ध पछि जीवन सुरु हुन्छ र यो कसरी अन्त हुन्छ जब यो महसुस गर्दछ को एक आदर्श मिश्रण हो। यस गीतमा एक वाचा छ जुन यो दम्पतीले आफ्नो प्रत्येक पैसाको प्रेम एक अर्कामा बाँड्न चाहन्छ।
Your। तपाईंको प्रेम कत्तिको गहिरो छ: -
यो गीत पप समूह बी गीजले गाएको छ। यो एक धेरै रमाईलो अभिव्यक्ति छ जहाँ एक आफ्नो / उनको पार्टनर देखाउन सोध्छन् कती गहिरो उहाँहरु साझा को साझा। यो एक सही समर्पण गीत तपाईंको केटीलाई आग्रह गर्न, अर्को गीतको साथ जवाफ फर्काउनको लागि हो।
I. म तपाईंलाई सँधै माया गर्नेछु: -
प्रख्यात ह्विटनी ह्युस्टनले गाएको हो, यो गीत उनीहरूको लागि हो जुन उनीहरूको केटीले जान्न चाहन्छन् कि उनीहरू सँधै तिनीहरूसँग रहनेछन् र यो एक अमर प्रेम हुनेछ, यद्यपि उनीहरू सँगै बस्दैनन् र टाढा छन्। यो गीत र संगीतको एक उत्तम मिश्रण हो। यो एक सुखदायक आभा दिन्छ जब तपाइँको केटीले यो सुन्नुहुन्छ। यदि तपाईं लामो दूरीको सम्बन्धमा हुनुहुन्छ भने, यो तपाईंको गीत हो।
B. रक्तस्राव प्रेम: -
लियोना लुइसले यो सुन्दर ट्र्याक गाए र यो उनीहरूको लागि हो जसले प्रेम गहिरो गर्दछ र जसले ती चीजहरूलाई बेवास्ता गर्दछन् जुन समाजले उनीहरूको कानमा फ्याँकन्छ। उनीहरूले मतलब गर्दैनन् र माया मात्र गर्छन्। यदि तपाईं र तपाईंको केटी उस्तै प्रकृतिमा हुनुहुन्छ भने, उहाँलाई समर्पणको रूपमा यो गीत पठाउनुहोस्।
Because. किनकि तपाईंले मलाई माया गर्नुभयो: -
माइन हार्ट विल गो ऑन 'भन्दा बाहेक सेलीन डायोनको प्रसिद्ध कार्य यो गीत हो। यो गीत केवल तपाईंको केटीलाई तुरुन्त पठाउनको लागि apporpiate छ उनको माया महसुस गरी। गीत संगीत को रूप मा सहज छ र ती शब्दहरु मा उनको आवाज उधारो लागि आश्चर्यजनक गायक को धन्यवाद।
Here. यहाँ तपाई बिना:
यो गीत D ढोका डाउन द्वारा छ। यदि तपाईं 'लामो दूरीको प्रेम' बताउने गीत खोज्दै हुनुहुन्छ भने, यो प्रयास गर्नुहोस्। यो गीत र भोक संग तपाईं चकित हुनेछ। यो तपाईंको केटीलाई समर्पण गर्नुहोस् यदि तपाईंले उनलाई याद गरिरहनु भएको छ र तपाईं उनीबाट टाढा हुनुहुन्छ।
My. मेरो माया: -
वेस्टलाइफ ब्यान्डको आकर्षक गितार स्ट्रम्सको साथ सबैभन्दा प्रसिद्ध प्रेम गीतहरू मध्ये एक। यो मेरो मनपर्ने मध्ये एकको रूपमा खडा हुन्छ र सँधै गीतहरूको छनोट हुनेछ जुन मैले एक मिक्सपेपमा राख्छु र मेरी छोरीलाई दिन्छु। यो गीत मार्फत उनको प्रेम महसुस गर्न यो सुन्दर ट्र्याक समर्पित गर्नुहोस्।
यदि तपाईंसँग झगडा भएको छ र तपाईं उनको मुड अलि राम्रो बनाउन चाहनुहुन्छ भने, यो यो हो, 'अधुरो' ब्याकस्ट्रिट केटाहरू द्वारा। गीतहरु बिना प्रेम बिना एक्लो हुनु रूपमा गहिरो जान्छ। त्यस्ता धुन र शब्दहरू भएको, यो गीत हो मैले मेरो छोरीलाई झगडा गरे पछि पठाउनेछु। तपाईं यसलाई पनि प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ।
२. मेरो केटी: -
यो गीत टेम्प्टेसनले थियो। एक हँसिया रोमान्टिक गीत जुन तपाईंको छोरीमा भएको कुनै पनि मुडको लागि एप्रुपिएट हुनेछ। गीतले महिना, चराहरू, रूखहरू मेरो केटीसँग तुलना गर्दछ। यदि तपाईं पनी र अझै उत्कृष्ट गीतहरूमा हुनुहुन्छ भने, त्यसो भए यो गीत समर्पणको रूपमा पठाउन दुई पटक नसोच्नुहोस्। यो गीत तपाईंको छोरीमा टाढा फाल्नुहोस् र उसलाई तपाईंको आकर्षणमा डुबाउनुहोस्।
खैरो चामल बनाम सेतो चामल पोषण
१. प्रेममा फस्न सहयोग गर्न सक्दैन:
यस एल्विस प्रेस्लीको सबैभन्दा प्रख्यात गीतको साथ तपाईंको केटीलाई तपाईंको प्रेम दर्साउनुहोस्। यो गीतले अरू सबैलाई सूचीमा शीर्षमा हराउँछ। सुखदायक गीतहरू र मान्छेको आवाजले तपाईंको छोरीलाई ठंडाउँन निश्चित छ।
तपाईका मनपर्ने के केहि हुन् जुन तपाईलाई सूचीमा थप्न चाहानुहुन्छ? हामी तिनीहरूलाई सुन्न खुसी हुनेछौं! मलाई पक्का विश्वास छ अरु मान्छेहरू पनि हुनेछन्।
पी.एस. यदि तपाईंलाई यो पोष्ट मनपर्‍यो भने, कृपया यसलाई साझेदारी गर्नुहोस्।
वजन घटाउन को लागी चिया बीउ खान उत्तम समय
बेली फ्याट कम गर्नका लागि उत्तम योग
कसरी पति र पत्नी बीच समस्याहरू समाधान गर्ने
कसरी कालो धागो पायल बनाउने
कसरी साना आँखाहरूका लागि काजल लागू गर्ने
मधुमेह रोगीहरूको लागि मीठो आलु राम्रो हो
करी पात र मेथीको दानाको साथ नरिवल तेल